Zvinhu Gedhi, chirongwa chaMozilla cheInternet yezvinhu IoT | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura Mozilla yakavhura yayo Zvinhu Zvinhu Gateway 0.7 kuburitswa, Chii yakasarudzika denderedzwa kuronga kuwana kwakasiyana zvikamu zvevatengi uye IoT zvishandiso.
Se Unogona kushandisa ZigBee uye ZWave protocols, WiFi kana kujeka kubatana kuburikidza neGPIO kusangana neIoT mapuratifomu.. Iyi Gateway firmware yakagadzirirwa mhando dzakasiyana dzeRaspberry Pi.
1 Zvinhu zvinoshanda sei Gateway?
2 Main kugadziridza kweshanduro 0.7
Zvinhu zvinoshanda sei Gateway?
Ichi chirongwa inogona kuiswa paRaspberry Pi bhodhi uye tora smart imba yekudzora system iyo inosanganisa ese maIoT zvishandiso mumba mako uye inopa maturusi ekuti utarise nekugadzirisa iwo kuburikidza newebhu interface.
Iyo chikuva zvakare inokutendera kuti iwe ugadzire mamwe ekushandisa ewebhu , que vanogona kusangana nemidziyo kuburikidza neWebhu Thing API.
Saka pachinzvimbo chekuisa yako nharembozha yemhando yega yega yeIoT chishandiso, unogona kushandisa imwechete yakabatana yewebhu interface.
Kuisa Zvinhu Gedhi, zvakaringana ne download firmware yakapihwa kukadhi re SD, vhura iyo faira "gateway.local" mubrowser.
Nezvo, zvingave zvichikwanisika kumisikidza kubatana kune WiFi, ZigBee kana ZWave, tsvaga zviripo IoT zvishandiso, gadzirisa ma parameter ekunze kuwana.
Iyo gedhi inotsigira maficha senge kuwanikwa kwechigadzirwa pane yemuno network, kusarudza kero yewebhu yekubatanidza kune zvishandiso kubva paInternet.
Kugadzira maakaundi ekuwana iyo gateway yewebhu interface, yekubatanidza zvishandiso zvinotsigira zvine chekuita ZigBee uye Z-Wave protocols kune gedhi, uye ichigonesa iri kure.
Zvakare nekugona kudzima zvishandiso kubva pawebhu application, kure kutarisa mamiriro eimba uye vhidhiyo yekuongorora.
Pamusoro peiyo webhu interface uye API, iyo gedhi zvakare inopa rutsigiro rwekuyedza kutonga kwezwi, uchibvumira kuzivikanwa uye kuitwa kwemirairo yezwi (semuenzaniso, "batidza mwenje mukicheni").
Main kugadziridza kweshanduro 0.7
Wakawedzera rutsigiro rwekubatanidza IP makamera kuronga vhidhiyo kuongorora. Ruzivo kubva kumakamera runogona kutorwa muchimiro chekutepfenyura vhidhiyo uye kuchengetedza traffic mune fomu yemifananidzo yega.
Se tsigira ONVIF inoenderana nemakamera akadai seFoscam R2. Kutsigira kamera kuri kurumbidzwa sekuyedza.
Mune ramangwana, zvakarongerwa kuwedzera huwandu hwemakamera akatsigirwa, kugadzirisa mushandisi mushandisi, uye kugadzirisa mashandiro evhidhiyo (kana uchiisa gedhi paRaspberry Pi, pane kunonoka kwenguva refu nekuda kwekukodha).
Kuti ikwanise muzvirongwa (Zvirongwa> Mapulagi), se unofanira kuisa ONVIF plugin, mushure meizvozvo iwe unofanirwa kumisikidza iyo yekuwana kamera kuburikidza neiyo "Gadzira" chikamu mune plugin.
Mushure mekumisikidza kamera, inogona kuwedzerwa pane runyorwa rwemidziyo iripo kuburikidza ne "+" bhatani pane iyo "Zvinhu" skrini.
Zvino mushure mekudzvanya pane kamera inoonekwa mune iyo chinyorwa, chinongedzo chinopihwa kuti chigadzire wega mifananidzo kana kutarisa kutenderera mavhidhiyo
Kune rumwe rutivi, iyi vhezheni inopa tsigiro yetembiricha sensors uye mvura inodonha sensors.
Nokubatanidza maseru anotsanangurwa, mushandisi anogona kuwedzera mitemo kuti iite otomatiki mhepo yekuisa kana feni kana tembiricha ichidarika muganho wakatemerwa kana kugadzirisa kutumira kwekuzivisa kana iyo sensor ichiona mvura pasi.
Shanduko dzakaitwa kune dhata dudziro fomati, iyo inobvumidza iwe kutsanangura rondedzero yezvinhu zvinotsigirwa, zviito, uye zviitiko.
Zvirongwa zvenguva yemberi zvinoratidzira basa rekusanganisira Zvinhu Gedhi mune zvakagoverwa zvisina waya ma routers, izvo zvinobvumidza kushandiswa kwemidziyo iyi kwete chete kupa mukana kune network, asiwo sehungwaru hwekutonga nzvimbo dzeimba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Zvinhu Gedhi, chirongwa chaMozilla cheInternet yezvinhu IoT